विद्यार्थी उपस्थिति मापन गर्दछ कि विद्यार्थीहरूलाई &quot;मोडेल अटेंडिस&quot; मानिन्छ। एक &quot;मोडेल सहभागी&quot; एक विद्यार्थी हो जुन स्कूलको वर्षको अवधिमा कम्तिमा en%% उसको भर्ना दिन उपस्थित रहन्छ (निरन्तर उपस्थित); वा हालको स्कुल बर्षको उमेर भन्दा कम्तिमा percentage प्रतिशत पोइन्टले उसको उपस्थिति सुधार गरेको छ भने (सहभागी सुधार गर्ने) विद्यार्थी उपस्थितिले पनि विद्यार्थी अनुपस्थित विद्यार्थीहरूको प्रतिशतलाई विचार गर्दछ जुन लामो अनुपस्थित छैनन्, वा स्कूल वर्षको अवधिमा भर्ना दिनको १०% भन्दा बढी हराइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रिपोर्ट गर्दा स्कूलमा भर्ना भएका धेरै जसो स्कुल वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू मात्र समावेश हुन्छन्। (डाटा स्रोत: २०१-201-२०१ school स्कूल वर्ष)
यस कर्पोरेसनमा विद्यार्थी उपस्थितिको नमूना के हो?
विद्यार्थी उपस्थिति मापन गर्दछ कि विद्यार्थीहरुलाई &quot;मोडेल उपस्थित&quot; मानिन्छ कि स्कूलको वर्षमा निरन्तर उपस्थिति वा सुधारिएको उपस्थिति प्रदर्शन गरेर। दीर्घ अनुपस्थिति विद्यार्थीहरूको दर हो जुन स्कूल स्कूलबाट कम्तिमा १० प्रतिशत स्कूलमा अनुपस्थित रहेका छन, कुनै पनि कारणको लागि।
राज्य औसत 65.3%
राज्य औसत 61.9%
राज्य औसत 18.3%
राज्य औसत 13.7%
यस कर्पोरेसनमा विद्यार्थीहरूले कसरी मोडेल उपस्थितिको लागि राज्यको अन्तरिम लक्ष्यहरूको तुलनामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्?
अन्तरिम लक्ष्यहरूले मोडेल उपस्थितिको लागि राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अपेक्षित प्रगतिलाई जनाउँछ।